Archive du 22/05/2012
Hopitaly Hikatona avokoa ny talatan�ny pantek�ty �
Any am-pelantanan�ny minisitry ny teti-bola, Hery Rajaonarimampianina, ny baolina momba ny fitakian�ireo mpiasan�ny fahasalamana isan-tsokajiny.	Hamaky ny tohiny...	Politique
Mbola mikatona ireo sekolim-panjakana
�Tsy hisy fampianarana handeha eto raha tsy mivaly ny fangatahanay amin�ny fanjakana. Nefa efa nanao ezaka ny governemanta ka andrasanay ny fahazoana izany amin�ity volana ity vao hisy ny fanapahana vaovao ho raisina ho firosoan�ny fampianarana indray�.
Lalatiana sy Fid�le
Manitsoka an�i Andry Rajoelina
Araka ny fanambarana nataon�izy ireo tao amin�ny onjam-peon�ny Free FM omaly, dia tsy maintsy miafina aloha i Fid�le Razara Pierre sy Lalatiana Rakotondrazafy satria tsy maintsy mitandrina ihany mba tsy hahafaty momoka ny tolona.
Mikoropaka ny fitondrana
Mihazakazaka ny fivoaran�ny raharaham-pirenena taorian�ny zava-nitranga teto Antananarivo ny sabotsy 19 mey teo. Sesilany indray ny fanambarana avy amin�ny mpitondra.
�Jadona no manjaka eto�
Ho an�i Monja Roindefo dia ny fitantanana tsy mazava ny raharaham-panjakana sy ny fananam-bahoaka no mitarika ireo hetsika ara-tsosialy tarihan�ireo sendika isanisany amin�izao fotoana.
Hitsena an�i Dada amin�ny heriny manontolo
Tsy nanaiky ny vahoaka omaly raha tsy nampidirina tao amin�ny kianjan�i Magro ny mpitarika ny VAhoaka Miray na dia niezaka mafy nanakana azy ireo tsy hiditra aza ireo mpiandraikitra ny filaminana teny an-toerana.
Mailo amin�ny fihetsik�i Andry Rajoelina
Mitohy tsy tapaka ny hetsiky ny zanak�i Dada ary vao maika aza miakatra ny marimpana politika ao amin�ny Magro Behoririka taorian�ny resaka mandeha an-gazety fa dia misokatra amin�ny fifampidinihina i Andry Rajoelina, tsy olana aminy ny fampiharana ny sori-dalana, ary afaka anaovana fifanarahana politika ny mikasika ny fodian�ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana an-tanindrazana.
�Tsy nandefa olona teny Ambohijatovo ny Kung Fu�
nandefa olona teny Ambohijatovo sy ny manodidina ny kung-fu ny sabotsy 19 mey teo nandritra ilay hetsika nokarakarain�ny Free FM.
Mpanjaka Rabehava sy ny Foko Rabehava 18 toko
Mitaky ny hamoahana ny anaran�ireo namono ny mpitsara Rahevana Michel
Nivoaka amin�ny fahanginany ny fianakavian�itompokolahy Rehavana Michel, ilay mpitsara novonoin�ny polisy tao Toliara ny 9 desambra 2011 teo.
SEMPAMA Amoron�i Mania
Tsy andairan�ny fandrahonana sy ramatahora
Manomboka miseho amin�izao fotoana izao ny fandrahonana sy fampihorohoroana mpampianatra ataon�ireo tompon�andraikitra sasany ao Amoron�i Mania.
Tsy mbola tara
Amin�ity talata ity no milaza fa hitafa amin�ny mpanao gazety ny filohan�ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina, mba hahafahany mitatitra ny anton-diany tany Etazonia sy hanambarany ihany koa ny heviny manodidina ny raharaham-pirenena.